Vatengesi vepamhepo kuti vashande pamusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Vatengesi vepamhepo kuti vashande pamusika wemasheya
Ehe, vatengesi vepamhepo ndeimwe yedzimwe nzira dzauinadzo panguva ino kuendesa mashandiro pamusika wemasheya. Hazvishamise kuti varimi vakawanda vari kuongorora mikana mitsva iyo internet yavanopa kuti vaite kuti kuchengetedza kwavo kubatsire kuburikidza nechiridzwa chemari ichi. Ndiine chinangwa chakapetwa, kune rumwe rutivi ponesa mashoma ma euro mumakomisheni uye kune imwe, mukusimudzira yavo mikana mari. Uye zvakare, zvinoita kuti zvive nyore kugadzirisa mashandiro mumisika yequity ine simba rakakura. Iwe haugone kukanganwa kuti mashoma masekondi mumusika wekutengesa akakosha mari yakawanda.
Mupfungwa iyi, vatengesi vepamhepo vakagadziriswa seimwe yemabheti ezvikamu zvine simba kwazvo munharaunda kuti vagutse zvido zvavo zvekudyara. Kusvika padanho rekuti izvo zvizvarwa zvitsva zviri kunyanya kupfuura en masse kune vepamhepo vamiriri. Kune zvakawanda zvakanakira izvo mapuratifomu anovapa ivo mukudyara kwavanobvumira investa mari munguva chaiyo. Kubva chero kupi, zvakanaka kubva kumba kana kune imwe nzvimbo yekuenda. Nechinodikanwa chega chekuva netekinoroji chishandiso kubva kuchinjisa mari kubva ikozvino.
Mumwe wemhedzisiro yekushandisa uku ndeye shanduko yemaitiro mune mudiki nepakati investor. Hapana chakaita sezvazvaive kusvika makore mashoma apfuura, ndoda munyika inogara yakaoma yekudyara. Iko kumhanyisa kwekuita kunoiswa pane imwe nhevedzano yekufunga kwehunyanzvi. Panguva ino, chikamu chakanaka chezviitiko chinoitwa nevashandisi vemusika wemasheya inoitwa kuburikidza neiyi nzira ine simba yeruzivo. Naizvozvo, hazvishamise kuti mabhanga akasarudzawo iyi yekuvandudza manejimendi modhi.
1 Vatengesi vepamhepo: mashoma makomisheni
2 Misiyano mumakomisheni avo
3 Kugadziriswa kwemabasa
4 Nei anoshanda online?
5 Mashandiro nema fomati epamhepo?
6 Kuwana maInternet services
Vatengesi vepamhepo: mashoma makomisheni
Imwe yeakanyanya mhedzisiro mhedzisiro yekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya kuburikidza neInternet broker ndeyakakosha kuchengetedza iwe yaungave iwe mune makomisheni Nekuti zvirokwazvo, mari yavo yekutengesa yakaderera kupfuura kuburikidza nemabhengi echinyakare. Kusvika pakuti ivo havana chokwadi kuti izvi zvinokukanganisa mukufamba kana maitiro akasarudzika sekuchengetwa, kugadziriswa kana kuunganidzwa kwezvikwereti. Hapana mubvunzo kuti pachave nemaeuros mazhinji aunogona kuunganidza gore rimwe nerimwe kana ukasarudza kuita pamhepo.
Chimwe chinhu chekutarisa panguva ino ndechekuti icho chinoreva kuti mukufamba kwenguva kwenguva refu kunogara kuchine pundutso kana iwe pakupedzisira wafunga kuhaya masevhisi eaya anonzi online brokers. Chii chimwe, une chipo chine simba nezve kunyatso kusangana nechishuwo ichi chauinacho mubato rekudyara. Kunyangwe kubva pane zvinopihwa uye kukwidziridzwa izvo zvinogona kuve zvinobatsira kwazvo kudzivirira zvaunofarira sewe mushandisi. Zvese zviri zviviri maererano nemisika yenyika uye avo vari kunze kwemiganhu yedu.
Misiyano mumakomisheni avo
Chero nzira, pane chokwadi chimwe chisingapikisane uye ndizvozvo kusiyana pakati pemapuratifomu epamhepo uye echinyakare kubhengi vanogona kutodarika makumi mashanu muzana. Chikonzero chakaringana kushandura ako manejimendi maitiro kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti iwe unofanirwa kuyeuka kuti pakupera kwezuva ivo vanogadzira zvakafanana sevhisi, pasina kana mutsauko mukutungamira kwese kwekudyara. Nerusununguko rwakawedzerwa rwekuti iwe uchave nerusununguko rwakawanda rwekushanda mumisika yezvemari uye chero nguva yezuva kana kunyangwe husiku kana ichi chiri chishuwo chako.
Kune rimwe divi, mari yemusika wemari ndiyo mwero wakapihwa naBolsas y Mercados Españoles yekushanda pamwe chete nemutengi wekupedzisira. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti chikamu chakanaka chevatengesi vanochaja zvakasiyana, asi mumafomati epamhepo unogona kuona kudzikiswa kune njere mumitengo yako. Ehezve, haizi mari yakawanda, asi kana iwe ukaisanganisa pamwe nezvimwe zvakanaka zvinopihwa neiyi sevhisi pamusika wemasheya, iwe unozogona kuve nehutano hwakaringana muakaundi yako yekutarisa. Izvo zviri kumagumo ezuva zvazviri, sezvawakaona pane kanopfuura kamwe chiitiko.
Chengetedza chinzvimbo muSpanish masheya egore rimwe zvichakutorera 0 euros pane mamwe mapuratifomu epamhepo kuita mari. Ichi chingori chimwe chezvakanakira zvinogadzirwa nekushandisa kweaya matsva makwara ekudyara mumusika wemasheya. Beyond yebasa ini yandinokupa iwe nguva dzese. Nekuti zvirizvo, iyo chikamu neayo anonyanya kukwikwidza makomisheni anotendera iwe kuti uwane yakawanda misika uye zvigadzirwa kubva pakutanga. Kwete chete kuburikidza nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya, asi kuburikidza nezvimwe zvigadzirwa zvemari (mvumo, zvigadzirwa kana mhando dzakasimudzwa).
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutarisa pamhepo broker musika uye utarise zvakanakisa kupihwa kana kukwidziridzwa. chinja kune yako mbiri semudhara mudiki nepakati. Ehezve, iwo mikana ichave yakanyanya uye iwe une zvakawanda zvekusarudza kubva. Kunyangwe pamwe zvisiri ese iwo anosangana nezvinodiwa zvako zvekudyara. Nekuti ivo vanofamba pasi pemaitiro akasiyana ekutengeserana uye kusvika padanho rekugadzira inopfuura rimwe dambudziko kuti iwe uzive kuti ndeapi mabhenefiti avanokupa panguva ino.
Nei anoshanda online?
Ndeupi mutengesi akanakisa wekutengesa pamusika wemari? Mupfungwa iyi, hapana mhinduro yakajeka uye yakapusa, asi zvinopesana, zvinoenderana nekuti ndeapi masevhisi auri kutsvaga kubva pakutanga. Chinhu chinosiyana kubva kune mumwe mugadziri kune mumwe, sezvaunogona kufungidzira kubva pakutanga. Nekuti zvakare haina kufanana kushanda ipfupi pane yepakati nepakati yakareba. Pane misiyano yakakura iyo iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo kusarudza akanakisa broker mumisika yemari. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi kana maonero kubva kune ako wega maonero ekuona.
Nekuti icho chiri nezve kupera kwezuva ndechekuti iwe unogona kuita akanakisa mashandiro pamusika wemasheya uye pasi peiyo yakanakisa misika mitengo. Zvekuti pakupedzisira kuponesa kunokubata iwe mukuverenga kweese mafambiro akaitwa mumisika yemari. Chimwe chinhu icho chechokwadi iwe chaunogona kuwana kuburikidza neanonzi epasi rese online brokers. Kune vatove vashandisi vazhinji vanoshanda neaya akakosha ekupindirana chiteshi. Iwe unoda kuva mumwe wavo here? Chero zvazvingaitika, zvikumbiro zvine chokwadi chekuti hauzombopotsa kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe iine makwikwi akanyanya mitengo yenguva yacho.
Mashandiro nema fomati epamhepo?
Iyi mhando yemapuratifomu emari inoita kuti zvikwanisike kuti iwe kuwana kumisika yese yemari, kunyangwe iwo ari kure kupfuura kwaunoenda. Munguva chaiyo uye pasina kana kunetsekana nekuda kwemaitiro ehunyanzvi kana ayo anobva mukushandiswa kwetekinoroji yepamusoro. Ichi chinhu chaunofanirwa kukoshesa zvakanyanya kunyanya pamusoro pezvimwe zvinhu. Kwete pasina, chichava shanduko mutsika dzako kuti ushande mumusika wemasheya. Iko kwaunogona kugadzira yako inotevera portfolio yekuchengetedzeka, asi nemari yakakosha mumakomisheni ayo anozoshandisirwa iwe mafambiro akagadzwa mumisika yemari.
Zvichienderana nezvazviri izvi, mubazi rekudyara iwe une zvakare maturusi akasiyana ayo anoita kuti kudyara kuve nyore. Nekuti pakati pezvimwe zvikonzero ivo vanokutendera iwe kunakidzwa nezvimwe yakasarudzika ruzivo nzira. Saka kuti nenzira iyi uye nguva dzose, iwe unoziva zvaunofanirwa kuita mumisika dzakasiyana dzemari. Pasina kufunga kuti chero mari inobuda kunze nekuti iri yemahara sevhisi. Ndokunge, chete kune vatengi veava online brokers.
Kuwana maInternet services
Kune rimwe divi, iwe unozogona kutenga uye kutengesa masheya chero nguva yezuva nekuti hazvina basa kuti uripi chaizvo. Nekuti iwe unogona kuendesa mashandiro aya kubva panharembozha, yemunhu komputa kana imwe yehunyanzvi chikuva. Iko hakuna miganho maererano nekushandisa kwayo. Kuti uwane icho, iwe unongoda chete kiyi nephasiwedi izvo zvavanokupa iwe kubva kuzvinhu izvi. Sezvo nezvikamu zvepamhepo zvemabhangi echinyakare.
Chekupedzisira, iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti ava vamiririri vezvemari vanoda kuti iwe uve nechengetedzo account kubva kwaunogona kushanda mumisika dzakasiyana dzemari. Chero zvazvingaitika, inofanira kunge iri yakabatana neaccount account yebhangi kuti iite mari yekuchinjisa semhedzisiro yemabasa aya. Pasina chero nguva ivo vanokuchaja iwe chero rudzi rwemakomisheni uye kwete kana zvirango.
Zvekuti nenzira iyi iwe une sarudzo nyowani yekudyara mari dzako kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti maererano nezvavanowana, uyu unenge watove mumwe mubvunzo usina chekuita nehunhu hwemapuratifomu emari. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoenderana neunyanzvi hwako kusarudza hwakanyanya hunhu kukudziridza hombe capital capital. Izvo zvichave zvakafanana mune ese ari maviri nzira dzekutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Vatengesi vepamhepo kuti vashande pamusika wemasheya
Ndezvipi zvipo zvemari yakavhenganiswa?